अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जानसक्ने संकेत, रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने - नेपालबहस
अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जानसक्ने संकेत, रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने
२८ पुष, काठमाडौं । भन्सार विभागबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आ.व. २०७६/७७ को प्रथम पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा पैठारीतर्फ ४.२ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ५८१.२६ अर्बमा सीमित भएको छ । तर यो आयातमा गम्भीर डरलाग्दा संकेतहरु पनि लुकेका छन् ।
विशेष गरी निर्माण सामाग्रीको प्रमुख श्रोतका रुपमा रहेको फलाम तथा फलामका उत्पादनको आायातमा २५ प्रतिशत ह्रास आएको छ । यो ह्रासले मुलुकमा निर्माण गतिविधि सुस्त भई देशमा रोजगारीका अवसरहरु व्यापक रुपमा गुम्न जाने खतरा देखिएको छ । रोजगारीका अवसरहरु गुम्दा जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ ।
क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा बजारमा माग घट्छ । माग घट्दा उद्योगहरु ृउत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन् । उत्पादन घटाउँदा रोजगारी कटौती गर्ने बाध्यता आईपर्छ । यसरी देश आर्थिक दुष्चक्रमा फस्न पुग्छ । यस अवधिमा प्रमुृख औद्योगिक कच्चापदार्थ मध्य जिंक, तामा, धागो र कपडा, रसायन, आलमुनियम, प्लाष्टिकका दानामा पनि ह्रास आएको छ ।
यो ह्रासले देशभित्त औधोगिक उत्पादन घट्ने संकेत गरेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक कच्चापदार्थको मात्र नभई औद्योगिक मेशिनरीको आयात पनि घटेको छ । क्यापिटल गुड्सको आयात घट्नु देशको उद्योगका लागि झन अशुभ संकेत हो ।
पैठारीतर्फ समग्रमा आ.व. २०७६/७७ को प्रथम पाँच महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १३.५ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ७६.१४ अर्बमा झरेको छ । यसैगरी समीक्षा अवधिमा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा २५.३ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ५४.७४ अर्ब, मेशिनरी तथा पार्ट्समा २.६ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ४७.१२ अर्ब, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा ६.३ ह्रास आई रु. ४१.३५ अर्ब, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा २६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २९.४३ अर्ब, अन्नको आयातमा ५.३ प्रतिशतले ह्रास आई २०.२२ अर्ब, हवाईजहाज तथा हवाईजहाजका पार्ट्सको आयातमा २१.३ प्रतिशतले ह्रास आई रु १४.३८ अर्ब, तयारी पोशाकको आयातमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १७.१८ अर्ब पुगेको छ ।
सुनको आयातमा ६०.४ प्रतिशतले ह्रास आई ६.९० अर्ब सीमित भएको छ । यसै गरी औषधीको आयातमा ८.८ प्रतिशतले ह्रास आई रु. १३.२७ अर्ब पुगेको छ । पोलिथिन ग्रेन्युल्सको आयातमा १३.२ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ९.०९ अर्बमा सीमित भएको छ । समीक्षा अवधिमा रु. १०.८९ अर्ब बराबरको रासायनिक मल र रु. १.७३ अर्ब बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर पनि आयात भएको देखिन्छ ।
दुरसञ्चारका सामाग्रीहरुको आयातमा ३५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १६.३७ अर्ब पुगेको छ । नेपालको पैठारी व्यापारमा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, युएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, स्वीट्जरलेण्ड, द. अफ्रिका, थाइलेण्ड, साउदी अरेविया, अर्जेन्टिना, द. कोरिया, युक्रेन, फ्रान्स प्रमुुख रुपमा रहेका छन् ।
Previous articleमाध्यमिकदेखि उच्चशिक्षासम्म योग शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार
Next articleअभावमा बाँचेकी चमेलीलाई मुक्तिनाथ विकास बैंकको साथ